Trano vita amin’ny hazo avokoa ny ankamaroan’ireo trano may ireo, antony nampitatra haingana ny afo, raha araka ny vaovao azo. Nanampy trotraka ny hafanana miaro rivo-malefaka izay tena namana akaikin’ny afo mihitsy amin’izao vanim-potoanan’ny main-tany izao. Tafakatra 3.000 isa ireo traboina vokatr’izany ka zaza amam-behivavy ny ankamaroany. Na izany aza tsy nisy ny naratra na ny aina nafoy. Voatery nafindra vonjimaika any amin’ny toeran-kafa sy any amin’ireo fianakaviany moa ny ankamaroan’ireo traboina ireo noho ny fanadiovana tsy maintsy hatao amin’ilay toerana sao sanatria mbola misy otrik’afo mampanahy.
Legende : May tahaka izao ny tanànan’Ambandrika ao Manaraka( Sary nindramina )